(၅)နှစ်ကျော်တွဲလာခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာမင်္ဂလာမော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အမွန်း - KyautthinPone
December 4, 2020 December 4, 2020 - by W LK - LeaveaComment
အမွန်းကတော့ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး (Me N Ma Girls) အမျိုးသမီးပေါ့အဆိုတော်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမွန်းကတော့သူ့ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြထားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ချစ်သူပြင်သစ်နိုင်ငံသား Raouf Bac ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉ခုနှစ်သြဂုတ်လချစ်သူသက်တမ်း (၄) နှစ်ပြည့်မှာ အမွန်းကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ်အစပိုင်းဇန်နဝါရီလမှာတော့အမွန်းက ချစ်သူနဲ့ အတူစေ့စပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ကတော့ မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲလေးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်းသူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာမင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့အမွန်းက ကြည်နူးစရာအမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ
“Court signing day!( Thank you designer Ma Yone Yone ! )”ဆိုပြီးရေးသားကာ မျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမွန်းတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ကြည်နူးစရာအမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
Previous Article ဆောင်းတွင်းကာလမှာနွေးထွေးစေဖို့ အဘိုးအဘွားများအတွက်စောင်၊ခြင်ထောင်နဲ့အတူ လိုအပ်တာတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
Next Article ဒုတိယမြောက်သမီးကိုမွေးဖွားပြီး ဆေးရုံကဆင်းခါနီး(၅)ထောင်တန်ပန်းစည်းကြီးနဲ့ surpriseတိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့ အိအိတုန်